Tilmaamaha Barnaamijka xagaaga ee Caafimaadka iyo Badbaadada ee Ardayda iyo Qoysaska - MPS_CMF
Tilmaamaha Barnaamijka xagaaga ee Caafimaadka iyo Badbaadada ee Ardayda iyo Qoysaska
Waxaa La Cusbooneysiiyey: 6/29/21
Sii wadida caafimaadka iyo badbaadada ardaydeena, qoysaskooda, iyo shaqaalaheena ayaa ahmiyada ugu weyn eh, maadaama MPS ay qorsheyneyso barnaamijyada xagaaga. Tilmaamahaan wuxuu tilmaamayaa waxqabadyada muhiimka ah ee MPS ay u diyaarisay ardayda kaqeybqaadata barnaamijyadooda xagaaga oo ay la jaanqaadayso Minnesota Waaxda Caafimaadka Minnesota ee COVID - 19 Hanuuninta Kahortaga ee Dugsiga Xagaaga.
MPS waxay sii wadi doontaa inay si dhow ula socoto xogta heerka kiisaska COVID-19 waxayna kala tashan doontaa saraakiisha caafimaadka ee heer degmo iyo heer gobolba dhaqankooda iyo badbaadadooda.
Daboolida Wajiga Maaskaraha
Daboolida wajiga ayaa sii socota oo looga baahan yahay Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ee gaadiidka dadweynaha, oo ay ku jiraan basaska dugsiga.
Ardayda iyo shaqaalaha waxaa si xoog leh loogu talinayaa inay xirtaan maaskaraha wajiga gudaha dhisme kasta oo MPS ah. Shaqaalaha shaqeeya marka laga reebo kuwa kale ama aan toos ula xiriirin ardayda da'doodu ka yar tahay 12 sano waxay dooran karaan inay go'aan kale gaaraan.
Ardaydu waa inay u keenaan maaskarahooda iskoolka iskuulka, laakiin maaskaraha ayaa la siin doonaa haddii aysan haysan.
Fadhiga baska waxaa loo diyaarin doonaa si loo ilaaliyo 6 fiit masaafada udhaxeysa wadaha iyo dhamaan wadayaasha. Fadhiga waxaa loo qoondeyn doonaa inuu ka caawiyo raadinta xiriir lacala haddii la soo sheego infekshannada COVID. Qof kasta oo saaran baska dugsiga ama baabuurta kale ee MPS waxaa looga baahan doonaa inuu xirto weji daboolan inta lagu jiro safarka oo dhan. Gawaarida si joogto ah ayaa looga nadiifin doonaa iyada oo si gaar ah isha loogu hayo meelaha xiriirka sare leh. Daaqadaha iyo hawo-mareenada ayaa laga tagi doonaa markay suurogasho si loo oggolaado hawo badan intii suurtagal ah.
Gaadiid loogu talagalay ardayda jiran
Haddii ardaygu buko inta uu iskuulka joogo, waxaa la siin doonaa baska guriga loogu qaado haddii qoyskoodu awoodi waayo inuu ka kaxeeyo dugsiga.
Kala Fogeynta Bulshada
In kasta oo aan loo baahnayn, haddana waxaa lagula talinayaa in shaqaaluhu ay sii wadaan 3 - 6 fiit oo masaafada bulshada ah ee ardayda ka yar. Ardayda da'doodu ka yar tahay 15 sano ayaa laga niyadjabin doonaa inay ku urursadaan hoolalka, meelaha la wadaago iyo musqulaha.
Ardayda iyo shaqaalaha waxaa lagu hayaa kooxo yar-yar oo wada jooga intii suurtogal ah maalinta oo dhan iyo maalinba maalinta ka dambeysa, gaar ahaan kooxaha ardayda ee aan hadda u-qalmin tallaalka sida ardayda dugsiga hoose.
Shaqaaluhu waxay ilaalin doonaan 6 fuudh oo masaafada udhaxeysa kooxaha ardayda ah waxayna xaddidi doonaan isku darka aan loo baahnayn ee u dhexeeya kooxaha ardayda sida ugu badan ee suurtogalka ah sida waqtiga qadada, nasashada musqusha, imaatinka iyo ka saarida, muddooyinka bilaashka ah, fasaxyada, iwm.
Calaamadaha: Jirada iyo ardaygaaga marka lagu sii hayo guriga
Maalin kasta dugsiga ka hor, qoysaska waa inay hubiyaan inay fiiriyaan haddii ardaygooda uu leeyahay astaamo COVID-19 illaa MPS ’ COVID-19: BaaritaankaCaafimaadka Guriga ee Maalinlaha ah qalab ama baaritaanka Calaamadaha ee degdegga ah.
Ardaydu waa inay GURIGA JOOGAan xitaa haddii ay leeyihiin KALIYA calaamadaha COVID-19.
Ardaydu waa inay sidoo kale JOOGAAN GURIGA HADA AY WAX KUU SOO BAXAAN COVID-19.
Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis ayaa sii wadi doona muddo 14 maalmood ah oo karantiil ah oo loogu talagalay ardayda aan la tallaalin. Waaxda Caafimaadka ee Minnesota waxay sheegaysaa in karantiil 14-maalmood ah uu weli yahay talo soo jeedinta CDC ee kahortagga ugu weyn ee ka hortagga faafidda fayraska keena COVID-19.
Ardaydu maahan inay karantiil gaaraan haddii shaqaalaha Xafiiska Caafimaadka ay xaqiijin karaan inuu ardaygu la kulmay tilmaamaha MDH ee hadda jira ee ku saabsan karantiilka tallaalka COVID kadib. Haddii ardaygu dhammaysto tallaalka COVID-19 (laba qiyaasood oo ah laba qiyaas oo taxane ah ama hal qiyaas oo ah hal qiyaas oo isku xigxig ah) oo la soo bandhigo, uma baahna inay karantiil ahaadaan haddii wax soo socda ay run yihiin:
Markuu ku dhacay COVID-19 waxay ahayd ugu yaraan 14 maalmood ka dib markii taxaddarkoodii taxnaa si dhammaystiran loo dhammaystiray.
Iyagu hadda ma laha wax astaamo ah oo ah COVID-19..
Qoysasku waa inay wacaan xafiiska caafimaadka ee iskuulkooda si ay ula wadaagaan haddii ardaydooda loo sheegay inay karantiil yihiin OO ay si buuxda u tallaalan yihiin.
Baaritaanada Candhuufta Ardayga ee COVID-19
Ardaydu waxay shaqaalaha sooshalka ee dugsiga ka codsan karaan imtixaan guri-qaadasho ah.
Soo Booqadaha Iyo Mutadawaciinta
Shaqaalaha MPS, booqdayaasha, mutadawiciinta iyo ururada dibedda ayaa laga filayaa inay maalin kasta ka hubiyaan imaatinkooda / dhisme kasta oo MPS ah si isgaarsiinta dabagalka ah loo heli karo haddii la helo kiis COVID-19 oo togan.
Taageerada Caadifadeed iyo Maskaxeed ee Ardayda
Taageero xagga shucuurta iyo caafimaadka maskaxda ah ayaa loo heli karaa xagaaga oo dhan ardayda labadaba barnaamijyada xagaaga iyo xitaa ardaydaas oo aan ku jirin wax barnaamij ah xagaaga. Haddii ardaygaagu ku jiro barnaamijka xagaaga ee dugsigaaga, toos ula xiriir dugsiga oo weydii inaad la hadasho Dhakhtarka Caafimaadka Maskaxda, Shaqaalaha Bulshada ee Dugsiga ama Kalkaaliyaha Dugsiga ee Ruqsadda haysta. Haddii ardaygaagu aanu ku jirin barnaamijka xagaaga, dugsigaguna aanu ahayn goob barnaamij xagaaga ah, fadlan la xiriir Waaxda Taageerada Waxbarashada Gaarka ah iyo Caafimaadka Maskaxda ee 612.668.5444.
Tababarida nadaafadda gacmaha
Ardayda, shaqaalaha iyo dadka soo booqda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay dhaqaan iyo / ama fayoobaan gacmahooda markay galayaan iskuulada iyo inay si joogto ah u dhaqaan iyo / ama u nadiifiyaan gacmahooda maalintii.
Dhammaan shaqaalaha MPS, soo booqdayaasha iyo tabaruceyaashu waxay u baahan doonaan inay soo galaan oo ka baxaan maalin kasta markay galayaan dhismaha dugsiga iyo sagxadaha si ay ula socdaan ardayda, qoysaska, shaqaalaha iyo booqdayaasha haddii la helo kiis COVID-19 oo togan.
Raadinta ama raadraaca xiriirka ardayda waxaa lagu sameyn doonaa iyada oo loo marayo imaatinka iskuulka maalinlaha ah iyo jaantusyada fadhi ee loo isticmaalo fasalka, waqtiga qadada iyo basaska. Ardayda iyo shaqaalaha loo aqoonsaday inay u baahan yihiin karantiil oo ay ku jiraan dugsiga, waxay dhammaysan doonaan maalinta dugsiga oo karantiilintu waxay bilaabmi doontaa maalinta ku xigta. Qoysasku waxay soo qaadan karaan ardaydooda goor hore, haddii la heli karo.
Tallaallada la Taageerayo
MPS waxay sii wadi doontaa lashaqeynta Waaxda Caafimaadka ee Minneapolis iyo ururada kale ee bulshada si loo helo meel loogu tala galay rugaha caafimaadka ee talaalka madaama talaalada loo heli karo caruurta yar yar. Waxaan sidoo kale la wadaagi doonnaa macluumaadka tallaalka qoysaska oo ku hadlaya afkooda hooyo iyada oo loo marayo xarumaha isgaarsiinta ee dugsiga iyo Degmada.
Nadiifinta iyo jeermiska goobaha
Shaqaalaha ka socda MPS 'Plant Operations waxay ilaalin doonaan jadwalka nadaafada iyo jeermiska jeermiska ee qolalka loo isticmaalo barnaamijyada xagaaga waxayna raaci doonaan jadwal adag oo ku saabsan nadiifinta fasalka, xafiisyada, musqulaha, hoolalka iyo jaranjarooyinka waaweyn, faaruqinta qashinka, qolka jimicsiga, iyo qolalka labiska .
Ilaha biyaha laga cabo ma shaqeyn doonaan
Sababo caafimaad awgood, ilaha biyuha laga cabo8 way sii socon doonaan iyagoo aan shaqeynin inta lagu jiro barnaamijyada xagaaga. Dhisme kastaa wuxuu leeyahay ugu yaraan hal buuxiye dhalo biyo ah, laakiin ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay keenaan dhalooyinkooda biyaha dib u buuxin kara maalin kasta.
Nidaamyada hawo bixinta
Dugsiyadu waxay sii wadi doonaan inay raacaan dhaqamada sifeeynta tayada hawada ee jiray intii lagu jiray sanad dugsiyeedka. Nidaamyada hawo qaadashadu waxay noqon doonaan hal laba saacadood ka hor iyo laba saacadood ka dib markay ardayda iyo shaqaaluhu yimaadaan oo ka baxaan dugsiga. Nidaamyada hawo bixinta ayaa sii wadi doona inay la shaqeeyaan miirayaasha ugu qiimeynta badan (MERV 11-14). Fasallada aan u adeegin nidaamka hawo qaadka oo leh awood MERV 14, miirayaasha HEPA ayaa loo isticmaali doonaa.
Cusbooneysiinta wararka qoysaska (Family Updates - Soomaali)
COVID-19: Ku soo baar guriga caafimaadka ardayga
Daawo Fiidiyoowyada loogu talo galay caafimaadka iyo badbaadada
Wajiga 5aad: Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo
Su'aalaha ku saabsan habdhaqanka caafimaadka iyo nabadgelyada ee MPS waxaa loo diri karaa: idahun@mpls.k12.mn.us.
Xusuusnowinaad ardaygaaga ku hayso guriga haddii aad ku aragto mid ka mid ah astaamahaan